Iinkqubo ezili-10 zokujoyina iiPDF ezininzi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Lola ifani | 16/06/2021 10:07 | Izixhobo zoYilo
Sihlala sigcina umsebenzi wethu ngePDF xa kungasafuneki senze naluphi na utshintsho. Yeyona ndlela ilungileyo yokukhusela uxwebhu lwakho kunye nokuthintela isimbo okanye ifomathi ekulahlekelweni xa usabelana nabanye abasebenzisi. Nangona kunjalo, yifomathi enzima ukuhlela. Ngethamsanqa, Kukho izixhobo kwi-intanethi esivumela ukuba siguqule ezi ntlobo zeefayile, ke ukufuna ukufaka izichazi, utyikityo okanye amaphepha emva koko ayongxaki. Kule posi ndiza kukuxelela ngezinye zezi softwares, ngakumbi Ndizokubonisa iinkqubo ezili-10 zokujoyina iiPDF ezininzi kwenye.
1 Ndiyayithanda iPDF
3 Izixhobo ze-PDF24
4 I-PDF elula
5 Hlanganisa iPDF
6 Indawo yokuhlala yePDF
9 Umbono wePDF-XChange
Ndiyayithanda iPDF yinkqubo yasimahla ekwi-intanethi evumela ukwenza utshintsho kwiifayile zePDF ngokukhawuleza nangokulula. Iqulethe i- uluhlu olubanzi lwezixhobo iluncedo kakhulu ekuvumela ukuba:
Hlanganisa iiPDF ezininzi kwenye kwaye uzibeke ngolungelelwano olufunayo.
Khipha amaphepha kwiPDF kwaye uwagcine njengefayile eyahlukileyo.
Cinezela iiPDF ke banobunzima obungaphantsi ngaphandle kokuphulukana nomgangatho.
Guqula iifayile zePDF kwiLizwi, kwi-PowerPoint okanye kwi-Excel kunye nokunye.
Hlela ii-PDFs, ukongeza isicatshulwa, imifanekiso okanye iimilo
Vula okanye ukhusele iifayile zePDF
Eyona nto intle kukuba ukusebenzisa ezi zixhobo, awudingi nokubhalisaFikelela ngokulula kwiwebhu, khetha into ofuna ukuyenza kwaye ulayishe iifayile zakho.
Encinci yinkqubo ekwi-Intanethi leyo, ukongeza ekuqulathe izixhobo zasimahla, Inikezela ngohlobo lweprimiyamu ngenzuzo engaphezulu (ye-7,5 euro ngenyanga). Injongo yale software kukuba hambisa umsebenzi wakho ngamaxwebhu, Ukwenza imisebenzi yakho ibe lula kakhulu. Nge-Smallpdf unga:
Hlela amaxwebhu: gqamisa iinxalenye zesicatshulwa kwaye ungeze imifanekiso, iimilo kunye nezichazi kumaxwebhu akho.
Amaxwebhu okusayina kunye nezivumelwano, kunye nokusayinwa kwesicelo.
Hlanganisa okanye hlula iiPDF.
Cinezela iiPDF ezinzima, ukuzithumela ngokukhawuleza kwaye kulula.
Faka iinombolo zamaphepha.
Guqula i-PDF ibe liLizwi, iPowerPoint kunye ne-Excel.
Olona phawu kuphela endilubonayo ngenkqubo kukuba, ngaphandle kobhaliso lwenkqubo, ungaqhuba kuphela amanyathelo amabini ngosuku simahla.
Si ujonge isantya kunye nokusebenza ngokufanelekileyo, Olu khetho ulukhangelayo. Izixhobo ze-PDF24 Isoftware yokuguqula iiPDF evumelayo Joyina amaxwebhu simahla. Ukulula kwayo kwenza umsebenzi ube lula, kuya kufuneka ukhethe ukujoyina iPDF kwikhaya leziXhobo zePD24 ekhaya kunye Tsala zonke iifayile ofuna ukuzijoyina kwiscreen kwaye inkqubo izakuyenza ngokuzenzekelayo kwimizuzwana.
Eyona nto intle ngesi sixhobo kukuba, nangona akukho sidingo sokufaka, inikeza inguqulelo yasimahla yedesktop, njalo ungajoyina iiPDF zakho nokuba awunalo uqhagamshelo kwi-Intanethi.
Okunye Inkqubo esebenzayo kunye neyisebenziseka lula kwi-intanethi es I-PDF elula, loo software yenzelwe ngokukodwa ukuze ukwazi Joyina amaxwebhu akho ngaphandle kwesidingo sokubhalisa, ngokukhuselekileyo nangokukhawuleza. Ivumela dibanisa ngaphezulu kwamaxwebhu amabini ngexesha elinye, ngokutsala iifayile kwisikrini kwaye ucofe kwiqhosha elithi "join PDF". Ungawangenisa amaxwebhu kwikhompyuter yakho, okanye ngokuthe ngqo kwiGoogle Drayivu okanye kwiDropbox. Ngapha koko, kunjalo ikhululekile ngokupheleleyo kwaye akukho mda wokusetyenziswa, ungayisebenzisa amaxesha amaninzi ngosuku njengoko ufuna.
Hlanganisa iPDF yinkqubo yasimahla, kulula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye Ubeka isixhobo sakho esinamandla ukudibanisa imifanekiso okanye iiPDF kuxwebhu olunye. Ukongeza, awudingi ukubhalisa okanye ukufaka naluphi na uhlobo lwenkqubo kwikhompyuter yakho ukuze uyisebenzise. Ungadibanisa iifayile zakho ngokuzitsalela kwiscreen okanye ngokunqakraza kwiqhosha "upload", xa athe angeniswa unqakraze ku "kopanya" kwaye uya kuba nakho ukukhuphela iPDF yakho. Into endiyithandayo kakhulu ngale software kukuba ikuvumela ukuba ulayishe ukuya kwiifayile ezingama-20 ezahlukeneyo.
Indawo yokuhlala yePDF
Indawo yokuhlala yePDF yinkqubo yewebhu ebonelela ngezixhobo ezikwi-Intanethi ukuze sebenzisa iiPDF simahla nangokukhuselekileyo. Ngale nkqubo unga:
Guqulela iifayile zeJPG kwiifayile zePDF nakwiPDF kwiJPG
Joyina kwaye wahlule iiPDF.
Enye yeenzuzo eziphambili kukuba xa ujoyina iifayile zakho uya kuba nakho ukwenza uhlengahlengiso, ungazijikeleza, uzicime okanye utshintshe iodolo yazo. Kwakhona, kwi-PDF Shelter izixhobo zabasebenzisi ezisebenzisa iifayile Uhlengahlengisiwe, abawuniki lo msebenzi kwiiseva ezikude, oko ke kunciphisa umngcipheko wokuba abanye bangafikelela kumaxwebhu akho.
I-CleverPDF ngumhleli wePDF okwi-Intanethi ukuba, ukongeza ekukuvumeleni dibanisa iiPDF ezininzi inye, ibonelela nge ukubanakho ukuguqula phantse nayiphi na ifomathi ifayile kwiPDF. Ungawaguqula amaxwebhu eLizwi, i-Excel, i-TIFF, i-Epub ... ngokucofa kanye. Dibanisa iifayile ezahlukeneyo kule nkqubo kulula kakhulu, ungenise nje kwikhompyuter yakho, kwiDrive okanye kwiDropbox. Ukongeza, unokuguqula iodolo yamaxwebhu, ukuze acwangciswe ngokuchanekileyo njengoko ufuna.
Ezinye izixhobo isebenza kakuhle xa kudityaniswa iiPDF I-PDF2GO. Kukwi-intanethi, simahla kwaye, ukongeza, iyahambelana neefowuni eziphathwayo kunye nezinye izixhobo, kuya kufuneka ungene kwiwebhu kwisikhangeli sakho esiqhelekileyo. Ukujoyina iiPDF ezininzi kwiPDF2GO khuphela iifayile zePDF ufuna ukudibanisa, ungayenza kwi-desktop yakho, ukusuka kwiDrive okanye kwiDropbox okanye usebenzisa i-URL. Unokutshintsha iodolo yeefayile urhuqa kwaye uphinde uhlengahlengise ngendlela othanda ngayo. Ukuba ucofa iqhosha "gcina", uya kufikelela iindlela zokugcina; ukuba ucofa kwindawo enye kwakhona, uya kufumana uxwebhu lwakho.
Umbono wePDF-XChange Sisicelo sedesktop que inikeza izixhobo ezingapheliyo yenzelwe ukumilisela zonke iintlobo zotshintsho kwiifayile zePDF. Phakathi kwezinto zasimahla ezinikelayo, oku kulandelayo kuyabonakala:
Guqula iiPDF zibe ziifayile zenye ifomathi, BMP, JPEG, TIFF, PNG, iLizwi ...
Yongeza zonke iintlobo ze izichasiselo kunye nezimvo
Ngelishwa, ukujoyina iiPDF ngale nkqubo uzakufuna ukukhuphela ingxelo yenkqubo ukuba ihlawulwe. Nangona kunjalo, ngenxa yokusebenza kwayo kakuhle, ukuba uza kuyisebenzisa kakhulu kwaye ukuba uza kwenza uninzi lwazo zonke izibonelelo zale nkqubo, kufanelekile.
Sejda sisixhobo esikwi-Intanethi ukudibanisa iiPDF, iyaqhubeka kwaye inikeza uthotho lwezenzo ezongezelelweyo eziya kuphucula uxwebhu lwakho final xa iifayile ezahlukeneyo kwinkqubo. Eyona nto intle kukuba, ukongeza ekubeni sisixhobo esisemgangathweni, kunjalo simahla ukufumana amaxwebhu ukuya kuthi ga 50 amaphepha okanye i-50 Mb nokuba awudluli kwi Imisebenzi emi-3 ngeyure.
Ukudibanisa iiPDF ngeSejda kulula kakhulu. Okokuqala, ngenisa iifayile zakho kwaye uzi-odole njengoko unqwenela. Emva koko, inkqubo iya kukunika ukhetho yongeza amanqaku encwadi, yongeza imibhalo esemazantsi, okanye wenze uluhlu lweziqulatho. Xa ugqibile, kuya kufuneka ukhuphele iziphumo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Iinkqubo ezili-10 zokujoyina iiPDF ezininzi